Ithimba Lethu - AfricArXiv
Amalungu eqembu le-KiaArXiv angabasebenza ngezizinda ezahlukahlukene nobungcweti emikhakheni ehlukahlukene efanelekile Kwezemfundo Ephakeme Nocwaningo e-Afrika.
Ungathanda ukujoyina iqembu le-AfricArXiv? Xhumana nathi futhi usazise ukuthi unganikela kanjani.
Ngemibuzo ejwayelekile sicela uthumele ie-mail info@africarxiv.org.
I-Technical University of Kenya [I-ORCiD]
Unjiniyela wesoftware kanye nomcwaningi kubuchwepheshe bezizukulwane ezilandelayo kufaka phakathi okuxubekile okungokoqobo nokungathandwa kwabathelisi esikubona, amapulatifomu we-blockchain, nezinzwa ezisezingeni eliphakeme zomoya.
Inyuvesi yase-Ibadan, eNigeria, [I-ORCiD]
Inyuvesi yaseKhartoum, eSudan [I-ORCiD]
Umfundi wezokwelapha, umcwaningi, usomabhizinisi kanye nommeli wokuvuleleka ocwaningweni, idatha, kanye nemfundo. Unentshisekelo yokwakha isiko lokucwaninga elivulekile e-Afrika nenkolelo eqinile yokwehlukahlukana nokufakwa. Umsunguli we-Open Sudan, uhlelo lokuvikela izwe elivulekile. Ubuye ekomitini eliphezulu le-SPARC Africa, ongumeluleki we Vula Ulwazi Lamamephu nasebhodini labaqondisi be I-FORCE11.
IGenetics and Regenerative Medicine Research Center (GRMCR) ye-University Putra Malaysia (UPM) kanye neMalaysia Genome Institute (MGI) [I-ORCiD]
Umfundi we-PhD we-Human Genetics esebenza ocwaningweni oluyisisekelo nolokuhumusha ekwakheni ikhambi elihlosiwe lomdlavuza wesibeletho somuntu esebenzisa ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu bokulandela inqubo.
I-African Digital Scholarship, Associate Research, I-Stellenbosch University, Iningizimu Afrika [I-ORCiD]
Ulawula umnyango Wezinsizakalo Zomtapo Wezincwadi Emitatsheni Yezincwadi yase-UCT futhi uhlale egcina umsebenzi wokuzimela ohlukahlukene ngokucebile, kufaka phakathi ukufundisa ngemfundiso kanye nenkulumo yobuciko nezifundo ezibucayi ezikhungweni zemfundo ephakeme eNtshonalanga Kapa, ​​enikeza imihlangano yokufundisana ngevidiyo, umsindo nezithombe, ukubhala ukubuyekeza, ekhombisa ubuciko bakhe bezithombe, futhi enza njengomshayi wesigubhu. UNiklas uphethe i-MA (FA) ne-BA (Hons) evela e-UCT, kanye ne-BA kwezemfundo evela e-University of Cologne.
Umphathi Wezinhlelo Zemitholampilo, Isibhedlela seYunivesithi yaseWürzburg
Ungusosayensi wokuphila onomdlandla, okhuluma izilimi eziningi onolwazi lweminyaka eyi-10 + ku-biology yamangqamuzana, ekhemisi nakwezinzwa. Usethuthukise ubuchwepheshe obuqinile ku-preclinical and clinical neuroscience emhlabeni jikelele. Ngaphezu komsebenzi wakhe wokucwaninga, uCarine uzibandakanya nokufinyelela isayensi nokwakha amandla esayensi e-Afrika. Lokhu kuhlangana kuhlose ukwenza lula amathuba okufunda aqondisa izigwegwe, ukudluliswa kolwazi kanye nokusebenzisana kwamazwe omhlaba ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yokufundisa ngokwesayensi nocwaningo e-Afrika. ”
Isikhungo sokuqeqesha kwezokuxhumana - I-TCC Africa, EKenya
Izindawo ezithakazelisa uKevin zifaka phakathi ucwaningo nentuthuko, ezabasebenzi, isayensi yedatha kanye nesayensi evulekile. Uhlose ukudlula lapho futhi anikele ngezixazululo ezakha inani nokuhlangenwe nakho okujabulisayo endaweni yokusebenza engabonakala iphindaphindeka futhi inamandla.
EMEA Izicelo Zokubonisana, eGibhithe
Umxhumanisi Wabaholi Bokuguqulwa Kwedijithali / Usosayensi WeDatha, Injiniyela Wezokucwaninga Nentuthuko, Umakhi Wezinhlelo Eziyinhloko ze-Master Principal kanye ne-Lean-Agile Program Manager.
Umsunguli we -AfricaArXiv, I-IGDORE, Benin [I-ORCiD]
Umthuthukisi we-WordPress onomlando kwizibalo ezisetshenzisiwe kanye nentshisekelo eqinile ezindabeni zokufinyelela ezivulekile e-Afrika nasekuhanjisweni kolwazi nezindlela ezenziwa ngazo ezwenikazi.
IMohamed V University & Hassan II Institute of Agronomy and Veterinary Medicine, Rabat, Morocco [I-ORCiD]
Umfundi we-PhD eNeuroscience
I-Uniklinik RWTH Aachen, Germany ne-Egypt
Ucwaningo lweSystem Biology, kusetshenziswa ukufunda ngomshini ukwakha amamodeli wokuqagela wezinhlelo zemvelo kusuka kudatha enkulu ephezulu yokufaka, ikakhulukazi idatha yokulandelana. Njengamanje esebenza ekuqondeni izifo okuhlanganisa idatha yesiguli neyamakhambi. Phambilini ubesebenza ezimbonini zeBiotechnology nezeClinic Research.
Umqondisi ku- Jabulani Intsha Yenguquko (JAY4T), eKenya
Isazi sebhayiloji nesayensi yokuxhumana nesifiso seConservation Biology futhi kusiza uhlelo lokonga lwendawo.
Umsunguli we-co-CTO futhi I-Vilsquare.org, ENigeria
Umphathi wephrojekthi nomcwaningi emikhakheni efana nezempilo, ezemfundo, ezokwakha, ezomthetho, ezamakhono, ezokukhiqiza, ezokuphepha nokuqapha.
Uhlelo Lukazwelonke Lokuvimbela Umdlavuza - eNigeria, eNyuvesi yase-Ibadan - eNigeria [I-ORCiD]
U-Olabode uyinsizwa yaseNigeria enentshisekelo enentshisekelo ekhethekile yokubona i-Afrika yephupho lethu. Ukholelwa ukuthi "impilo ingcebo". Ukuze uphile kahle, kufanele uphile kahle. Uneziqu ze-MSc ne-BSc kwi-Biochemistry (Cancer Research and Molecular Biology).
Ubheke phambili emathubeni okusebenzisa amakhono ami okubambisana, ocwaningo, obuholi nawobuchwepheshe. ”
I-Alexandria University, eGibhithe
Isazi samakhemikhali aphishekela iziqu ze-MSc ku-Neuroscience ne-Biotechnology ngesizinda sobuchwepheshe ku-biology yamangqamuzana kanye nesiko le-stem cell.
UDkt Sara El-Gebali
Umsunguli we-OpenCider, Germany [I-ORCiD]
USara ungumsunguli we-OpenCider kanye ne-Research Data Management Team Leader ezinze eBerlin. Phambilini ubesebenza njengomgcini wemininingwane yesayensi e-European Molecular Biology Laboratories (EMBL) -EBI nase-EMBO eneziqu ze-PhD ocwaningweni lomdlavuza e-University of Bern, Switzerland. Ungummeli oqinile wokwakhiwa komphakathi kanye nokukhuthazwa kwabesifazane kanye namaqembu angamelwe kahle emikhakheni ye-STEM.
West Virginia University, eU.SA [I-ORCiD]
Umfundi we-PhD oneminyaka eminingana yomsebenzi wezimboni njengososayensi wedatha. Ukucwaninga kwakhe kugxile kwezomnotho wezezemvelo, ukusimama, ezomnotho ezindawo kanye nomqondo wegrafu.
Umsunguli we -AfricaArXiv, Finyelela 2 Imibono', I-IGDORE, EJalimane naseKenya [I-ORCiD]
Umqeqeshi nomxhumanisi ku-Open Science Communication and Science Management Management. Ngokugxila kumathuluzi edijithali esayensi nelebuli yakhe ', uhlose ukuqinisa Ucwaningo ezwenikazi lase-Afrika nge-Open Science.
Umqondisi ophakeme, Imfundo yePivot Global Iqembu Lokubonisana
Umlingani Wepostdoctoral ku- University of Sussex [I-ORCiD]
Umqondisi ophakeme, Isikhungo Sokuqeqesha Ezokuxhumana (TCC-Afrika)
Umhlahlandlela Wokubandakanya we-ORCID [I-ORCiD]
IWashington University & Ukufinyelela Okuvulekile eNigeria
University of Oxford (UK), Inyuvesi yaseWitwatersrand (RSA) kanye ne I-IGDORE [I-ORCiD]
Ngaphansi kweMicroscope umsunguli